मानसिक रोगले पनि कोरोनाका जस्तै लक्षणहरू देखिन सक्छन् ! कसरी थाहा पाउने ? – Sapana Sanjal
July 21, 2021 71
Sapana Sanjal : कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भए यता फेरि पनि मानिसहरुमा मनोवैज्ञानिक तनाव बढेर गएको छ । कोभिड – १९ महामारीको समय सबैको लागि तनावपूर्ण समय हो । विपत्तिको बेला सामान्य डर , चिन्ता , बेचैनी , छटपटी र तनाव हुनु स्वाभाविक नै हो । यसलाई असामान्य अवस्थामा मानिसहरूमा देखिने स्वाभाविक प्रतिक्रिया नै मानिन्छ ।
Prevदु-र्घटना पछि गायिका टिका सानुको अवस्था यस्ताे, पलपल रोईन, आमाबुवा सम्झेर भक्कानिइन (भिडियो हेर्नुस्)
Nextपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, श्रावण ६ गते बुधबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल